Dhakhtar Shiine ah ayaa dejiya heerar loogu talagay ka soo kabashada cudurka 'coronavirus' – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dhakhtar Shiine ah ayaa dejiya heerar loogu talagay ka soo kabashada cudurka...
Dhakhtar Shiine ah ayaa dejiya heerar loogu talagay ka soo kabashada cudurka ‘coronavirus’
Agaasimaha waaxda daaweynta neef-mareenka iyo daryeelka degdegga ah ee Isbitaalka Zhongnan ee Jaamacadda Wuhan ayaa dejiyay heerar gaar ah oo loogu talagalay bukaannada laga soo celiyay Covid-19 markii ay ka baxayaan isbitaalka oo ku noqonayaan guryahooda.
Cheng Chen Xun wuxuu yidhi, cilmibaadhis caafimaad iyo indho indhayn caafimaad ayaa taageeray xaqiiqda ah in bukaannada ka soo kabanaya Covid-19 aysan hadda ahayn kuwo la is qaadsiiyo, oo si nabadgelyo ah ugu laaban karaan guriga.
Sean wuxuu sharraxay in bukaannada soo kabsaday ay tahay inay la kulmaan shuruudo gaar ah oo laga soo saarayo isbitaalka, ayna mari doonaan kormeer 14 maalmood ah ka hor inta aysan ku noqon guryahooda.
Heerarka waxaa ka mid ah heerkulka jirka ee caadiga ah in ka badan saddex maalmood, calaamadaha neefsashada si weyn ayey u soo fiicnaadeen, sawirrada sambabka oo muujinaya nuugitaan weyn oo nabarro daran, iyo natiijooyinka baaritaanka xaakada, nasopharyngeal swabs iyo samballada kale ee neef-mareenka ayaa ah diidmo laba baaritaan oo isku xigta oo DNA ah, oo leh waqti go’an Inta u dhaxaysa sanbal qaadista wax aan ka yarayn 24 saacadood.
Xun ayaa yidhi “Shurudaha ka bixitaanku maaha inay waafaqsan yihiin mabaadii’da daaweynta cudurka oof wareenka, laakiin sidoo kale waxay u hoggaansamaan shuruudaha maaraynta caabuqyada neef-mareenka,” ayuu yidhi Xun.
Wuxuu intaas ku daray in bukaannada laga soo saaray isbitaalku ay tahay inay mari doonaan kormeer caafimaad oo 14-maalmood ah oo lagu kormeerayo goobaha go’doominta ah oo ay mar kale galaan baaritaanka DNA ka hor inta aysan ku noqon guryahooda.
Previous articleGuddoomiyaha Rugta Ganacsiga oo soo dhaweeyey go’aanka Xukuumadda ee Cashuur-dhimista
Next articleWarbixintii ugu danbeysay ee caronavirus Soomaaliya oo gaadhey dhimashadii ugu badneyd
Warbixintii ugu danbeysay xanuunka COVID19 Soomaaliya